सडकमा यत्रतत्र पैसा छरेर दुई महिला गायब, कोरोना फैलन सक्ने भन्दै स्थानीयवासी त्रसित « Pariwartan Khabar
सडकमा यत्रतत्र पैसा छरेर दुई महिला गायब, कोरोना फैलन सक्ने भन्दै स्थानीयवासी त्रसित
17 April, 2020 2:58 pm
प्रदेश नम्बर नं. २ को अस्थायी राजधानी जनकपुरधाममा २ जना महिलाले सडकमा यत्रतत्र १० रुपैयाँका नोट छरेर गायब भएका छन् ।
सडकमा यत्रतत्र पैसा छरेर गायब भएपछि स्थानीयबासीहरु कोरोना भाइरस संक्रमण फैलने सक्ने आंशकामा त्रसित बनेका छन् । स्थानीयवासीहरुले कोरोना संक्रमण फैलाउने उद्धेश्यले ती महिलाले पैसा छरेर भागेको हुनसक्ने आशंका गरेका छन् ।
जनकपुरधाम वडा नम्बर नं. ४ मा पर्ने महावीर चोकमा अपरिचित २ महिलाले सडक र पसल अगाडि पैसा फ्यालेर भागेपछि स्थानीयवासी त्रसित बनेका हुन् ।
शुक्रबार (आज) करिब १ बजे २ जना महिलाले १० रुपैयाँको नोट जथाभावी छरेर भागेको स्थानीयवासीहरुले बताए । निलो र हरियो रंगको साडी लगाएका ती महिलाले करिब सय मिटरको दूरीसम्म सडक र पसल अगाडी १० रुपैयाँको नोट फ्यालेको स्थानीयवासीहरुले बताए ।
स्थानीयवासीले सडकमा पैसा किन फ्यालेको भन्दै सोधेपछि महिलाहरु पेठिया बजारतर्फ भागेको स्थानीयवासीहरुले बताए । “निलो र हरियो रंगको लुगा लगाएकी मुस्लिमजस्तै देखिने दुईजना महिलाहरु पैसा फ्याल्दै हिँडेको हामीले देखेका थियौं ।” महावीर चोकस्थित शंकर साहले भने, ‘पैसा किन फ्यालेको सोधेपछि उनीहरु दुवै एकाएक भगो ।’
छरिएको उक्त नोट चीन चारजना मानिसले उठाएको पनि उनले बताए । घटनालगत्तै स्थानीयवासीले प्रहरीलाई जानकारी गराएका थिए । प्रहरी टोलीले नोट छरिएको ठाउँमा तत्कालै सेनिटाइजर छर्केको बताइएको छ ।
उक्त घटनासँग सम्बन्धीत महिलाहरुको खोजी भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
|तस्वीरमा पैसा छरिएको ठाउँलाई सनिटाइज् गर्दे प्रहरी। श्रोतः|